Dowlada Somaliya iyo Maamulka KMG ah ee Kismaayo oo Mombasa ku wada hadlaya – SBC
Dowlada Somaliya iyo Maamulka KMG ah ee Kismaayo oo Mombasa ku wada hadlaya
Wararka ka imanaya magalada Bombasa ee dalka kenya ayaa sheegaya in halkaasi uu ka furmay kulan u dhaxeya dawlada somaliya iyo maamulka KMG ee Jubooyinka.
Madaxaweynaha dawlada somaliya Xasan sheekh Maxmuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa saaka soo gaaray Mombaza,waxaa sidoo kale halkaasi dhexdhexaadinta ka qaybgalaya madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta.
Gudoomiyaha Maamulka KMG ee Kismaayo sheekh Axmed Maxmed islaam ayaa ka amba baxay Nairobi si uu ula kulmo madaxweynaha, iyadoona la filayo in kulankani la isku dhaafsado arimo la xiriira muranka ka jira kismaayo,kaasi oo salka ku haya in dawlada somaliya maamusho shirka ka socda halkaasi.
Ilo-wareedyo ku sugan halka uu shirkani ka dhacayo ayaa sheegaya in ay jiraan ismari waa la xiriira in dawlada Somaliya gacanta laga galiyo Maamulida shirka dhismaha Juba-land ee ka socda magalada kismaayo oo haatan heer gabo-gabo ah maraya.
Ajandayaasha maamulka KMG ah ay wataan ayaa ah in ay yihiin dawlad goboleed ka dhismaya Gobolada jubooyinka iyo Gedo,isla markaasina aqoonsan yihiin dawlada Somaliya ayna hoos imaan doonaan,balse dawlada dhexe ayaa ku doodeeysa in gabi ahaanba lagu soo wareejiyo shirkaasi maamulkiisa iyo Maamulka Dekeda iyo garoonka diyaaradaha ee Kismaayo.
Wali ma jiraan wax qodobo ah oo ka soo baxay shirkani oo saxaafada aan loo shegen,balse ah shir ay gar wadeen ka tahay dawlada Kenya,waana shirkii ugu horeyay ee noociisa ah ay iskugu imaaday madaxda somalida iyo Maamulka Raaskaanboniyinta gacanta ku haya Kismaayo.